मेडिकल शिक्षामा सुधारको संकेत, योग्यता सूची र तोकिएकै शुल्कमा धमाधम भर्ना - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । गत वर्षसम्म एमबीबीएसको तोकिएको शुल्कभन्दा बढी लिएको गुनासो चौतर्फी आएको थियो । मेरिटका आधारमा भन्दा जसले बढी शुल्क बुझाउन सक्छ, उसैले भर्ना पाउँथ्यो । यस्तामा न्यून अंक हुने र पैसा हुनेलाई कलेजले सिधै भर्ना लिन्थ्यो । डा. गोविन्द केसीले मेरिटका आधारमा भर्ना गर्नुपर्ने माग हरेक अनशनमा राखे । कार्यान्वयन जटिल थियो ।
‘सुधार प्रयास जारी राखेका छौं,’ डिन डा. अग्रवालले भने, ‘मेरिटका आधारमा तोकिएकै शुल्कमा भर्ना गर्दा स्टेक होल्डरलाई मन नपरेको हुन सक्छ । पहिला आफूखुसी चलेको थियो । अब चलेखलसमेत बन्द भयो ।’ अाजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ ।